OUTLOOK STORY: पहिलो महिला प्रहरी चैत्यमायाको जीवन: धोती, खाकी र सर्टमै ड्युटी, १७ वर्षे जवानीमा टुँडिखेलमा तालिम, तलब ३० रुपैया !:: Artha Dabali
OUTLOOK STORY: पहिलो महिला प्रहरी चैत्यमायाको जीवन: धोती, खाकी र सर्टमै ड्युटी, १७ वर्षे जवानीमा टुँडिखेलमा तालिम, तलब ३० रुपैया !
नोना कोइराला, शैलजा आचार्य र मङ्गलादेवीलाई हनुमानढोकामा राखिएको थियो । वहाँहरूलाई राखिएको ठाउँमा मेरै ड्युटी थियो । ‘एउटी महिला भएर पुलिसमा जागिर खाने आँट गरेकी हिम्मतवाली आइमाई’,उनीहरुले भने ।
मङ्गलबारको दिन ।
बिहानदेखिको अविरल वर्षा ।
साँझपख थामिएर आकाश केही खुल्यो ।
अफिसको काम सकेर म हतारहतार चाबहिलतर्फ लागेँ । केही वर्षअघिसम्म प्रत्येक हप्ता आउने मन्दिरमा नआएको निकै समय भएछ ।
त्यहाँ मेरो आत्मिक नाता जोडिएको एउटा पुरानो घर थियो ।।
चाबहिलतिर पुगेको बेला म त्यस घरमा पुगेकै हुन्थेँ । मन्दिरको मूलद्वारकै सामुन्ने ठिङ्ग उभिएर मन्दिरको हरेक गतिविधि नियालिरहने त्यही पुरानो घरलाई खोज्न मेरा आँखा तल्लिन थिए, जुन घर अहिले त्यहाँ देखिएको थिएन ।
सोधखोज गर्दा मन्दिरका एक भक्तले २०७२ सालको भूकम्पले पुरानो घर भत्काएको हुँदा सोही ठाउँमा अहिले नयाँ शैलीको घर बनेको जानकारी दिए ।
यो सुनेर मेरो मन चिसो भयो र एकै सासमा उनीसित प्रश्न राखेँ, ‘घर त भत्कियो….अनि घरधनी…?
घरधनी त सकुशल हुनुहुन्छ नि !’ ‘यहीँ हुनुहुन्थ्यो, भजन सकेर भरखर घरतर्फ लाग्नुभो’ यो जानकारीपछि मेरो मन उक्त घरकोमूलीलाई भेट्न आतुर भयो ।
उनी अर्थात नेपाल प्रहरी सङ्गठनकी पहिलो महिला प्रहरी सदस्य चैत्यमाया डंगोल । उमेरले पचासी वर्ष पार गरेकी चैत्यमाया ।
एक हिम्मतवाली व्यक्ति ।
तत्कालिन समयमा महिलाले प्रहरीमा जागिर खानु त्यो साहस जुटाउनु चानचुने थिएन ।
म पुग्दा कोठामा एक्लैले पोलेको मकै छोडाएर खाइरहेकी थिइन् ।
म आपूूलाई चिनाउने प्रयासमा थिएँ तर उनका टाठा कान र तेजिला आँखाले मलाई ठम्याइहाले ।
लामो समयपछि मलाई सामुन्नेमा पाएर उनी खुसी देखिइन् । सन्चो बिसन्चोको औपचारिकतापछि उनले आफ्नो विगत बताउन थालिन्
कान्छा डंगोल र तरीमाया डंगोलको कोखबाट काठमाडौं चावहिलमा जन्मेकी चैत्यमाया नेपाल प्रहरीमा महिला सहभागिताकी जिउँदो इतिहास हुन् ।
उमेरले पचासी वर्ष पार गरेकी उनमा अहिले पनि कुनै शारीरिक दुर्बलता वा कमजोरी देखिँदैन । अहिलेसम्म कुनै रोगले दुःख नदिएको बताउने उनमा विगतका हरेक घटनालाई तिथिमिति र व्यक्तिको नामसहित बताउन सक्ने बेजोडको स्मरणशक्ति छ ।
नेवार परिवार मा जन्म, कर्मले पुलिसः
काठमाडौंको मध्यम वर्गीय नेवार परिवारमा वि.सं. १९९० साल जेठ महिनामा उनको जन्म भएको थियो । आमाबाबुका सात सन्तानमध्ये सबैभन्दा जेठी चैत्यमाया नेपाल प्रहरी सङ्गठनकी पनि जेठी महिला सदस्य बनिन् । बाल्यकालको सुखद अनुभूति स्मरण गर्दै उनी आपूmभन्दा मुनि चार बहिनी र दुई भाइहरू भएको र बाल्यावस्थादेखि नै भाइबहिनीसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताउछिन् ।
खेल्ने उमेरका बालबच्चालाई काममा लगाउनुहुन्न भन्ने बाबुआमाको सोचले गर्दा नै बाल्यकाल सुखपूर्वक बितेको उनको बताइन् ।
पछि दश वर्षको उमेरमा एउटै टोलमा बस्ने व्यापारी परिवारका एक्ला छोरा केदारबहादुर श्रेष्ठले उनलाई मन पराए । वि.सं. २००० सालमा वैवाहिक सूत्रमा बाँधिइन् । जिवन स्नेह र सुखमयमै वित्यो ।
६७ वर्ष अघिको पुलिस जिन्दगी यसरी सम्झिनः
आजभन्दा ६७ वर्षअघि अर्थात २००८ सालमा प्रहरी जवान पदमा नियुक्त भएकी प्रथम महिला प्रहरी चैत्यमाया डंगोल सेवा आरम्भका दिनलाई सम्ँिझदै भन्छिन्, “त्यसबेला राणाकाल हटेर भर्खर प्रजातन्त्र आएको थियो । प्रजातन्त्र आएको तीन महिनामा त मरो जागिरे जीवन सुरु भइहाल्यो ।” महिलालाई भर्ना गर्ने चलन नै नरहेको समयमा तपाईंले नेपाल प्रहरीमा कसरी प्रवेश पाउनुभयो ? भनी जिज्ञासा राख्दा उनले हाँस्दै पुरानो अनुभव यसरी सुनाइन्,
“२००७ साल फागुन ७ गते राणाकाल समाप्त भयो । त्यही फागुनको अन्त्यमा महिला जागरणको अभियान चलाउन केही महिलाहरू चारुमती वहालमा आए । छोरीचेलीलाई पढाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले टोलका चेलीहरू जम्मा गर्दै अक्षर चिनाउने काम सुरू गरे ।
म पनि त्यही समूहमा सहभागी भएँ र त्यहीँबाट अक्षर चिनेँ । त्यहाँ पढ्नेमा हामी पच्चीस जना चेली थियौं, त्यसबेला म सत्र वर्षकी थिएँ ।
एकदिन वहाँहरूले हामीलाई घुमाउँदै सिंहदरबार पु¥याउनुभयो । त्यहाँ हामीलाई किन लगियो भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । हामीलाई बाहिरै बस्न भनेर वहाँहरू भित्र जानुभयो ।
केही समयपछि पुलिसको ड्रेसमा एक जना मान्छे हामी बसिरहेको ठाउँमा आए । उनले तिमीहरू पुलिसमा जागिर खान्छौ भनेर सोधे । हामी सबैले एउटै स्वरमा ‘नखाने’ भनेर जवाफ दिएपछि उनी फर्केर गए । अहिलेको प्रहरीलाई त्यतिबेला ‘पुलिस’भन्ने चलन थियो ।
त्यसको केहीबेरमा हामीलाई त्यहाँ लैजाने महिलाहरू आउनुभयो र पुलिसको सबैभन्दा ठूलो मान्छेले सोध्दा तिमीहरूले हुन्न भनेछौ अब जेल हाल्छन् भन्दै डर देखाउनुभयो ।
पुलिसमा जागिर खान सोध्ने त आइजिपी रहेछन् :
धेरैपछि मात्र थाहा भयो हामीलाई पुलिसमा जागिर खान्छौ भनेर सोध्ने त आइजीपी नर शमसेर जवरा पो रहेछन् । त्यसपछि हामीले डराएर एकै स्वरमा ‘हुन्छ हामी पुलिसमा जागिर खान्छौं’ भन्यौं । तत्काल हाम्रो छनोट सुरु भयो ।
पच्चीसमध्ये हामी बाह्र जना छनोटमा प¥यौं । अरु कसैलाई पुड्को भनेर त कसैलाई उमेर बढी भएको भनेर फर्काइयो । छानिएकालाई भोलिपल्टदेखि तालिम लिन बिहान ०६ः०० बजे टुँडीखेल आउन भनियो ।
त्यसबेला सेनाको परेड भक्तपुरको सल्लाघारीमा र काठमाडौंको टुँडिखेलमा हुन्थ्यो भने पुलिसको तालिम लिने ठाउँ नभएको हुँदा तालिमका लागि टुँडिखेल बोलाइन्थ्यो । आइजीपीको अफिस पनि त्यसबेला सिंहदरबारमा थियो । धेरै पछिमात्र महावीर भवन, नक्सालमा हेडक्वार्टर सरेको हो ।”
त्यसबेला देशव्यापी रूपमा महिला जागरण सुरू गरिएको र त्यसै अन्तर्गत महिलालाई पनि पुलिसमा सहभागी गराउने प्रयास स्वरूप यो काम भएको थियो । भोलिपल्टदेखि उनी तालिमका लागि टुँडीखेल जानुपर्ने भयो । नजाँदा जेल हाल्ने डरले उनलाई सताइरहेकै थियो । उनी भोलिपल्ट ठीक समयमा टुँडिखेल पुगिन् र तालिममा सहभागी भइन् ।
टुंडिखेलमा तालिमः हेडक्वाटर महावीर भवनः
पुरानो स्मृति सम्झँदै उनले भनिन्,, “यातयातको सुविधा नभएको त्यस समय बिहान ६ बजे टुँडिखेल पुग्न ५ बजे घरबाट हिँड्थेँ । बिजुलीको उज्यालो थिएन, अहिलेजस्तो धेरै मान्छे थिएनन् । जाडो महिनामा त मध्यरातझैं जताततै चकमन्न हुन्थ्यो ।
केही दिन तालिम गरेपछि बानी पर्दै गयो र जागिर ठीकै रहेछ भन्ने लाग्यो । त्यसबेला प्रहरीको ब्यारेक थिएन । घरबाट डिउटीमा गएका पुलिस डिउटी सकेर घरै फर्कन्थे । बिहान ५ बजे घरबाट हिँडेकी म साँझ ७ बजेमात्र घर फर्कन्थेँ ।”
पारिवारिक विचलनः नयाँ कोर्ष शुरुः
केही दिनमा प्रहरीमा जागिर खाएर घरलाई समय नदिएको विषयलाई लिएर उनी र श्रीमान्बीच ठाकठुक सुरु भयो । ठाकठुकले विवादको स्वरूप लियो । अरूसित हाँसी–हासी बोल्ने श्रीमान् उनीसँग बोल्न छोडे । पतिपत्नीबीच बोलचाल बन्द भएपछि उनी घर छोडेर माइतमा बस्न थालिन् । तालिम सकिनका लागि पाँच महिना अझै बाँकी थियो । माइतबाटै आउने जाने गरेर उनले बाँकी तालिम सम्पन्न गरिन् ।
श्रीमान्को व्यापार ठूलो थियो । घरमा काम गर्ने र व्यापारमा सघाउने मानिस कोही थिएन । तालिम सकिएको केही दिनमा श्रीमान् आफै उनलाई लिन आए । त्यसपछि जागिरको विषयलाई लिएर यी दम्पत्तीबीच कहिल्यै विवाद भएन । श्रीमान्को देहान्त भएको अहिले दश वर्ष भइसकेको छ । उनी अहिले एकल जीवन बिताइरहेकी छन् ।
पुराना दिनमा आफूले सम्पन्न गरेका काम र जिम्मेवारीलाई उनले यसरी बताइन्, “म पुलिसमा आउँदा १७ वर्षकी थिएँ । तलिममा हामीलाई बिहानाको खाना उतै दिइन्थ्यो । ट्राफिकका लागि भनेर भर्ना गरिएका हामी महिलाहरूको अधिकांश समय ट्राफिकसम्बन्धी काममा नै बित्थ्यो । यसभन्दा बाहेक महिला प्रहरी जहाँ आवश्यक हुन्थ्यो हामी त्यहीँ खटिन्थ्यौं ।
नुवाकोटको पुरानो सदरमुकाम भिमसेनस्थानमा थियो, त्यहाँको सदरमुकाम विदुरमा सार्ने निर्णय भयो । स्थानीय जनता विरोधमा उत्रिए, पुरुषहरूलाई त प्रहरीले नियन्त्रण ग¥यो तर महिलालाई नियन्त्रण गर्न पुरुष प्रहरीले मिलेन । चार जना महिला प्रहरी सहयोगीको रूपमा दिएर मलाई त्यहाँ पठाइयो । म त्यतिबेला हवल्दार थिएँ । चार जनालाई कमान्ड गरेर म त्यहाँ गएँ । हामी गएपछि स्थिति नियन्त्रणमा आयो । त्यहाँको काम सम्पन्न गरी फिर्ता भयौं ।”
कमाण्डमा : नुवाकोटदेखि बन्दीपुरसम्म
“सुरूमा तनहूँ जिल्लाको सदरमुकाम बन्दीपुर थियो । वि.सं.२०२१ सालमा सदरमुकामलाई बन्दीपुरबाट दमौली सार्ने निर्णय भयो । त्यो सदरमुकाम सार्दा त्यहाँ ठूलो बिरोध भयो । त्यहाँका जनताले प्रहरीलाई नाकाबन्दीमा पारे । तीन दिनदेखि खान नपाएका प्रहरीलाई हेलिकप्टरमा खाद्यान्न लैजान भनी गण्डकी अञ्चलाधीश आपैm काठमाडौं आएका थिए । त्यहीबेला उहाँले महिला पुलिसलाई बन्दीपुर लैजान पाए भीडलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने कुरो मन्त्रालयमा गर्नुभएको रहेछ ।
तत्काल मेरो कमान्डमा चार जना महिला प्रहरी बन्दीपुर खटियौं । हेलिकप्टरबाट गएका हामीले त्यहाँ पुगेर महिलाहरूलाई नियन्त्रणमा लियौं र स्थितिलाई सामान्य बनायौं । त्यो समय नै अनौठो थियो । हामी महिलालाई प्रहरीको पोसाकमा देखिपछि बिरोधमा उत्रिएका त्यहाँका महिलाले हामीमाथि कुनै आक्रमण गरेनन् । हामीलाई उनीहरूले आफूजस्तै देखेर यिनीहरूमाथि पनि के हातपात गर्नू भन्ने सोचे होलान् । त्यहाँको काम सम्पन्न भएपछि हामी फक्र्यौ ।”
३१ वर्षे सेवा काल : इमान्दारितामा चुकिन
जागिरका पुराना कुरा सम्झँदै उनी भन्छिन्, “वि.सं. २००८ सालमा जवानमा भर्ना भएकी म २०१८ सालमा हवल्दार भएँ, त्यसपछि २०३२ सालमा अ.स.इ. भएँ र आठ वर्ष असइमा विभिन्न ठाउँमा खटिएर काम गरेँ र ०३९ सालमा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग भएँ । ३१ वर्षे मेरो सेवाकालमा म कहीँ पनि आफ्नो कर्तव्य र इमान्दारीबाट चुकिन । सबैले मेरो कामलाई मन पराउनु हुन्थ्यो ।
चैते हिम्मत भएकी छ भन्नुहुन्थ्यो । पूर्णसिंह खवास, ढुण्डीराज शर्मा र खड्गजीत वरालजस्ता प्रहरी महानिरीक्षकसँग प्रहरी महानिरीक्षक नहुँदैदेखि नजिक रहेर काम गर्न अवसर पाएँ । वहाँहरूले पछिसम्म जहाँ भेट्दा पनि चैतेमाया भनेर नाम किटेर बोलाउनु हुन्थ्यो, स्नेह गर्नुहुन्थ्यो र इज्जत दिनुहुन्थ्यो । अहिले सबैको देहान्त भए पनि आईजीपी खड्गजीत बराल अझै हुनुहुन्छ । कुनै कार्यक्रममा म आएकी छु भन्ने वहाँले थाहा पाउनुभयो भने अहिले पनि बोलाएर भेट्नु हुन्छ ।”
त्यसबेला प्रहरी नेतृत्वको काम गर्ने शैली र कर्मचारीको मनोबल बढाउन नेतृत्वले चाल्ने कदमबारे स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, “वि.सं. २०२९ सालदेखि २०३५ सालसम्म खड्गजित बराल आइजीपी हुनुहुन्थ्यो । वहाँलाई आफ्नो समस्या अवगत गराउन भनी म २०३२ सालमा हेडक्वार्टर गएकी थिएँ । वहाँको कार्यकक्षमा पस्ने क्रममा मेरो एउटा खुट्टो ढोका बाहिर र अर्को खुट्टो भित्र थियो । त्यहीबेला वहाँ आफ्नो कुर्चीबाट जुरूक्कै उठ्नुभयो ।
म केही डराएँ र चुपचाप उभिएँ वहाँले ‘ चैत्ये तिम्रो समस्या मैले बुझिसकेको छु । ल तिमी आजदेखि असइ भयौ’ भन्नुभयो र मलाई तुरुन्तै असई बनाएर पठाई दिनुभयो । वहाँमा अरूको मनको कुरो बुझ्न सक्ने अनौठोको क्षमता थियो । म हवल्दार भएको १५ वर्ष पुगिसकेको हुँदा अब जागिर छोड्छु भन्ने विचारले म वहाँलाई भेट्न गएकी थिएँ । वहाँले मलाई देख्नासाथ म आउनुको उद्धेश्य कसरी बुझ्नुभयो ? यो घटना सम्झँदा अहिले पनि अचम्म लाग्छ । जागिर छोड्ने विचारले आएकी भनेर भन्नै नपाई वहाँले मलाई सन्तुष्ट बनाएर पठाउनुभयो ।”
वि.सं. २०१५ सालको चुनावमा भरतपुर र अन्य स्थानीय निकायको चुनावमा धनुषालगायतका जिल्लाहरूमा खटिएको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, “त्यो जमानामा यातायातको सुविधा थिएन, कतै हिंँड्ने कतै ट्रक र लहरी चढ्ने गर्दै यात्रा गर्नुपथ्र्यो । । घरबाट अफिस हिँडेको मान्छे घरमा खबरै नगरी बाहिर खटिएर १८÷२० दिनमा फर्केको अनुभव पनि छ मसँग । महिनौ दिनसम्म घरबाट बाहिरै भइन्थ्यो । फोन थिएन, खटिएको ठाउँबाट म यहाँ छु भनेर घरमा खबर गर्न नपाउँदा घरमा कति चिन्ता हुन्थ्यो होला !”
हाल एकल जिवनः भान्जीको साहरामाः
६५ वर्षको दाम्पत्य जीवनमा यी दम्पत्तीका कुनै सन्तान भएनन् । अहिले उनकी भाञ्जीले उनलाई घरायसी काममा सहयोग गर्ने र स्याहार गर्ने गरिरहेकी छन् । खर्च चलाउन मासिक रू. १६,००० निवृत्तिभरण पाउँछिन् । जागिर सुरु गर्दा उनको तलब ३० रुपैयाँ थियो । उनी भन्छिन्, “२०३९ सालमा असईबाट अवकाश लिँदा ८० रुपैयाँ पेन्सन आउँथ्यो, अहिले त्यो बढेर १६,००० पुगेको छ । पहिला दुःख गरेर जागिर खाएको, अहिले त्यसैको पेन्सनमा बाँचेकी छु, खुसी लाग्छ । पुलिसमा जागिरे भएर राजधानीबाहिरका धेरै ठाउँ घुम्न पाएँ ।” ओठमा हल्का मुस्कान ल्याउँदै उनले भनिन्, आफ्नो परिवारभित्रका मान्छे र छिमेकका साथीहरू घरगृहस्थीमा लागेर उपत्यका पनि छोड्न पाएनन्, तर मैले त देशै घुमेकी छु । यो सम्झँदा भने खुसी लाग्छ ।”
२०६९ सालमा प्रहरी परिवार महिला सङ्घले उनलाई सम्मान ग¥यो । त्यस क्षणलाई उनी जीवनको सबैभन्दा खुसीको क्षण मान्छिन् । “सम्मानका लागि मलाई पुलिस क्लबमा निमन्त्रणा गरिएको थियो । त्यहाँ पुग्नासाथ धेरै महिला प्रहरी बहिनीहरूले घेरेर तपाइँले सुरु गरेको ठाउँमा अहिले हामीले काम गरेर परिवार पालिरहेका छौं । तपाइँ हाम्रो भगवान् हो भन्दै श्रद्धा गरे, इज्जत दिए । आइजीपी कुवेरसिंह राना उठेर मलाई सम्मान गर्नुभयो । म यति धेरै खुसी कहिल्यै भएकी थिइन ।”
बन्दीगृहमा ड्युटी गर्दाको क्षण उनको स्मृतिमा अझै ताजा छ् । उनी भन्छिन् “वीपी कोइरालालाई सुन्दरीजलमा राखिएको बेला महिला नेतृहरू नोना कोइराला, शैलजा आचार्य र मङ्गलादेवीलाई हनुमानढोकामा राखिएको थियो । वहाँहरूलाई राखिएको ठाउँमा मैले लामो समय ड्युटी गरेँ । वहाँहरूले मलाई पछिसम्म सम्झिरहनु हुन्थ्यो । डिउटीकै क्रममा वहाँहरूसँग राम्रो चिनजान भयो । एउटी महिला भएर पुलिसमा जागिर खाने आँट गरेकी हिम्मतिली आइमाई भनेर वहाँहरूले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो ।”
महिलाको पोसाक त्यतिबेला कस्तो थियो भन्ने प्रसङ्गमा उनले भनिन्, “हामी सुरुको महिला प्रहरी भएकाले यही नै पोसाक लगाउने भन्ने तय थिएन, आइजीपी नर शमसेर जबराको पालामा हामीले सेवा सुरु गरेका थियौं । वहाँले हामीलाई खाकी रंगको सर्ट र खाकी रंगकै धोती लगाउन भन्नुभयो । वहाँ अवकाश भएर जाने बेला खाकी रंगको पाइजामा र सर्ट लगाउने आदेश आयो र त्यही लगाइयो ।
जीवी याक्थुम्बा आइजीपी भएपछि पहेँलो रंगको धोती, खाकी सर्ट लगाउने र टाउकोमा चुच्चे टोपी पनि लगाउने भन्नुभयो । सिलाएर तयार बनाएको कपडा दिइन्थ्यो । जाडोमा खाकी जर्सी थियो । पछि फेरि नर शमसेर जरसाहेबकै पालामा जस्तो पाइजामा र सर्ट नै लागू भयो । ढुण्डीराज शर्मा आइजीपी हुनासाथ खाकी सर्ट र खाकी धोती आयो र आफैले बुनेको नीलो रंगको उनी टोपीमा ब्याच टाँसेर ड्युटी गरे पनि हुन्छ भनियो ।”
हिजो जस्तो समस्या छैनः हातहातमा मोवाइल, ठाउँ ठाउँ मोटरबाटो :
भावी पुस्तालाई सन्देश दिँदै उनले भनिन्, “पहिलाजस्तो अप्ठ्यारो स्थिति अहिलेका प्रहरी बहिनीहरूलाई छैन । प्लेनदेखि गाडीसम्म सवारीसाधन छ, हातहातमा मोवाइल फोन छ, बच्चालाई दूध छुटाएर पहिलै–पहिले महिनौं दिन घरबाहिर ड्युटीमा जानुपर्ने स्थिति थियो, अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिले त बच्चा हेरिदिने अफिस पनि खोलेको छ रे पुलिसमा भन्ने सुनेको छु । पहिले त राजधानीबाहिर ड्युटीमा जाँदा रात प¥यो कि वास र खाना खोज्दै हिँड्नुपथ्र्यो, होटल लज थिएन, अरुको घरमा बास मागेर पाहुना भएर बस्ने हो । अहिले जहाँ ड्युटी खटिए पनि खाने, सुत्ने, बस्ने सबै व्यवस्था सरकारले ब्यारेकमा मिलाई दिएको छ । काम गर्न धेरै सजिलो छ । यस्तो अवस्थामा सबैले इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ ।”
हालसम्म इतिहासको गर्भमा लुकेर बाहिर आउन नसकेका नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित धेरै तथ्यबारे यिनलाई राम्रो हेक्का छ । नेपाल प्रहरी सङ्गठनले विगतमा लामो समय आफ्नो सङ्गठनमा बिताएकी यीे अग्रणी महिला सदस्यबाट धेरै ऐतिहासिक तथ्यबारे जानकारी लिई आफ्नो ऐतिहासिक गाथालाई बढाएर अभिलेखीकरण गरी प्रशस्त लाभ लिनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । हाम्रो मुलुकको हरेक क्षेत्र एउटा नराम्रो रागबाट ग्रसित देखिन्छ । मानिस जीवित हुँदासम्म उसको कुनै मतलब नराख्ने र पछि पश्चाताप गर्ने । नेपाल प्रहरी पनि यस रोगबाट अछुतो छैन भन्ने प्रमाण यी महिलाको हकमा पनि लागू भएको देखिन्छ ।
शताब्दी वर्षसँग नजिकिँदै गएका यस्ता अग्रणी व्यक्तिहरूलाई विगतमा आपूm कार्यरत रहेको निकायले नै उचित सम्मान दिनु पर्दछ । चैत्यमाया स्वयम् प्रहरी कर्मचारी हुन्, उनलाई प्रहरीको श्रीमती सङ्घले सम्मान गरेको देखियो, जुन सम्मानको कुनै अर्थ छैन । उनको अवकाशपछि जन्मिएको संस्थाले उनको कुनचाहिँ कार्य सम्मानजनक देख्यो र सम्मान ग¥यो ? यस्ता प्रश्न उठेमा जवाफ दिने हैसियत उक्त संस्थाले राख्दैन । तसर्थ यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।